IP Media Solutions များအတွက်မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့
Tag Archives: အိုင်ပီမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့
အသစ်စက်စက်ဘုတ်အဖွဲ့, ကြိုဆို Net ကဝိပဿနာရဲ့ Larissa Görnerအရွေးခံရကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်
BOTHELL, ရေချိုး - ။ နိုဝင်ဘာ 14, 2018 - IP ကိုမီဒီယာ Solutions (ရည်ရွယ်သည်) အတွက်အဆိုပါမဟာမိတ်အဖွဲ့ကယနေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများဆီသို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်သူကိုဒါရိုက်တာတစ်ဦးကအသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက် 2018-2019 ဘုတ်အဖွဲ့ကြေညာခဲ့သည်။ အားလုံးလက်ရှိဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ - ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမိုက်ကယ် Cronk (မြက်ချိုင့်), ဒုတိယဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစတိဗ် Reynolds က (ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ), ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ် Andreas ရည်ရွယ်ထား ...
အမျိုးသား TeleConsultants စံချိန်စံညွှန်း-အခြေပြု IP ကိုမီဒီယာကွန်ရက်များပံ့ပိုးပေးရန်ရည်ရွယ်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
လင်းဒေးလ်ကာလီဖိုးနီးယား - ။ နိုဝင်ဘာ 5, 2018 - အမျိုးသား TeleConsultants (NTC) က IP ကိုမီဒီယာ Solutions (ရည်ရွယ်သည်) အတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့, IP ကိုမှ SDI- ကနေပြောင်းရွှေ့ဖွင့်စံချိန်စံညွှန်းများ၏မွေးစားပေးရန်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အကျိုးအမြတ်မယူစက်မှုလုပ်ငန်းအုပ်စုတစ်စုပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် မီဒီယာကွန်ရက်များကိုအခြေခံသည်။ NTC မီဒီယာမှမဟာဗျူဟာမြောက်နည်းပညာနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတိုင်ပင်ခံအင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း, ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးမှု, နှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ...
ရည်ရွယ်ကြိုဆို၎င်း၏ 100th အဖွဲ့ဝင်, အမျိုးသား TeleConsultants
BOTHELL, ရေချိုး - ။ အောက်တိုဘာ 16, 2018 - IP ကိုမီဒီယာ Solutions (ရည်ရွယ်သည်) ယနေ့များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသား TeleConsultants (NTC) အနေနဲ့တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ NTC ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူရည်ရွယ်ထားသည် IP-based မီဒီယာကွန်ယက် SDI- ကနေပြောင်းရွှေ့ဖွင့်စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ် 100 အဖွဲ့ဝင်များ၏မှတ်တိုင်ရောက်လေပြီ။ NTC မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းပညာနှင့်စစ်ဆင်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး ...
အိုင်ပီမီဒီယာ Applications ကိုများအတွက် Enthusiasm နဲ့ကြီးထွားလာ IBC2018 IP ကိုဟန်ပြနေရင်မြန်အောင်၏ကျော်ကြားမှု
BOTHELL, ရေချိုး - ။ အောက်တိုဘာ 10, 2018 - IP ကိုမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ရည်ရွယ်သည်) ယနေ့ IBC2018 IP ကိုဟန်ပြကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် - ထိုအသံအင်ဂျင်နီယာလူ့အဖွဲ့အစည်း (AES), ရည်ရွယ်ပါသည်, အဆင့်မြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအသင်း (AMWA), ဥရောပအသံလွှင့်ခြင်းဖြင့်ကမကထ သမဂ္ဂ (EBU), Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (SMPTE®) ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် (VSF) - အကြီးဆုံးကြီးကအကောင်းဆုံး IP ကိုတက်ရောက်ခဲ့သည် ...
ပိုမိုစုံလင်လာ, စတူဒီယို Technologies က Inc ကို, နှငျ့ World Wide နည်းပညာရည်ရွယ် Join
BOTHELL, ရေချိုး - ။ စက်တင်ဘာ 7, 2018 - IP ကိုမီဒီယာ Solutions (ရည်ရွယ်သည်) အတွက်အဆိုပါမဟာမိတ်အဖွဲ့ကယနေ့သုံးပိုပြီးကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းကပူးပေါင်းကြပါပြီကြေညာခဲ့သည်။ ပိုမိုစုံလင်လာ, စတူဒီယို Technologies က Inc ကို, နှငျ့ World Wide နည်းပညာတွဲဖက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ပိုမိုစုံလင်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်မှဆန်းသစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, အသံလွှင့်, OTT, ပူးပေါင်းဆောင်နှင့်အီလက်ထရောနစ်လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်ပို့တစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်ပါတယ် ...
IP ကိုဟန်ပြစီစဉ် IP ကိုနည်းပညာနှင့် IP ဟန်ပြပြဇာတ်ရုံထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းအပေါ်တင်ဆက်၏အပြည့်အဝ Slate ကြေညာ
စက်တင်ဘာ 6, 2018 - ထိုအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းဗိုလ်မှူးနည်းပညာနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများအဖွဲ့အစည်းများ - အသံအင်ဂျင်နီယာလူ့အဖွဲ့အစည်း (AES), IP ကိုမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ရည်ရွယ်သည်), အဆင့်မြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအသင်း (AMWA), ဥရောပအသံလွှင့်ယူနီယံ (EBU), Motion ၏ Society က ရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (SMPTE®), နှင့်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် (VSF) - အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC2018 မှာ IP ကိုဟန်ပြ၏ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ယနေ့ကျယ်ပြန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ...
ပထမအချိန်များအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲချမှတ်ရန် SMPTE ST 2110 အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဆန္ဒပြယူခဲ့ဖို့ရည်ရွယ်
BOTHELL, ရေချိုး - ။ သြဂုတ်လ 17, 2018 - IP ကိုမီဒီယာ Solutions များအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (ရည်ရွယ်သည်) ယနေ့ကြောင်းအဖွဲ့ဝင် SET ကုန်စည်ပြပွဲ, Sao Paulo အတွက်သြဂုတ်လ 28-30 မှာ IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါဆန္ဒပြပွဲများစင်ပေါ်ကိုလိမ့်မယ်ရည်မှန်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲများ SET ကုန်စည်ပြပွဲမှာ SMPTE ST 2110 အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ၏ပထမဦးဆုံးပြအမှတ်အသားပါလိမ့်မယ်။ "အုပ်ချုပ်စံချိန်စံညွှန်းများ SMPTE ST 2110 suite ကို၏မကြာသေးခင်ကသဘောတူညီချက်ရေးထိုးမှုနှင့်အတူ ...